बलिउड आइटम गर्ल राखी र सनीबीच बिवाद? सनीले पोर्न इन्डस्ट्रीमा नम्बर दिएको आरोप « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
बलिउड आइटम गर्ल राखी र सनीबीच बिवाद? सनीले पोर्न इन्डस्ट्रीमा नम्बर दिएको आरोप
समय समयमा विवादमा आइरहने बलिउड अभिनेत्री हुन् राखी सावन्त । कहिले सामाजिक सन्जालमा फोटो राखेर त कहिले विभिन्न विषयमा र अन्य कलाकारबारे ‘बोल्ड’ अभिव्यक्ति दिएर उनको चर्चा भइरहन्छ ।
पछिल्लो समय बलिउड बजारमा फेरि राखीको चर्चा चुलिएको छ । यसको कारण हो– उनले अर्की अभिनेत्री सनी लियोनीलाई लगाएको आरोप । यही आरोपका कारण अब यी दुई अभिनेत्रीको बोलचाल नै बन्द भएको छ । त्यसो त बलिउड विश्लेषकहरु अब सनी र राखी कहिल्यै नमिल्ने अड्कलबाजीका साथ बाहिर आएका पनि छन् । त्यसमाथि राखीले सनीको यो आरोप भारतको प्रसिद्ध पत्रिका बिजनेस टाइम्सलाई दिएकी हुन् ।
टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राखीले भनेकी छिन्, ‘सनी लियोनीले मेरो फोन नम्बर पोर्न इन्डस्ट्रीमा दिएकी छिन् र मलाई बारम्बार फोन आएकाले हैरान भएकी छु ।’ उनले थपेकी छिन्, ‘सनीले मेरो नम्बर दिएकाले मलाई फोन गरेर भिडियो र मेडिकल सर्टिफिकेट माग्न थालिएको छ । कतिले मलाई राम्रो पैसा अफर पनि गरेका छन् । मलाई चाहिँ त्यो दुनियाँमा जान कत्ति पनि मन छैन ।’
यसको पनि राखीसँग कारण छ । उनले भनेकी छिन्, ‘किनकि मैले सनीको जुम्ल्याहा बच्चा भएपछि बधाई दिन एउटा भिडियो पोस्ट गरेकी थिएँ । त्यसपछि सनीले मलाई ‘के तिमीलाई ईस्र्या लाग्यो भन्दै नचिनेको नम्बरबाट फोन गरेकी थिइन् ।
त्यसैले उनले मेरो नम्बर अरुलाई दिइन्, मलाई सताउन ।’ राखीले आफू बलिउडमा नै खुसी भएको र परिवार सबै बसेर हेर्न मिल्ने फिल्ममा मात्र काम गर्ने स्पष्टोक्ति पनि दिएकी छिन् ।
छानबिन समितिको यस्तो आशंका : निर्मला हत्या प्रकरणमा बाहिरियो डरलाग्दो रहस्य (भिडियो सहित)
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका २ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुग्नै